बाग्लुङमा ३३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च | Margadarsannew.com
बाग्लुङमा ३३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
गलकोट । बजेट अभावमा कतिपय विकास निर्माण योजना अलपत्र परेको सन्दर्भमा बाग्लुङमा भने विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सङ्घ तथा प्रदेशमार्फत् जिल्लामा आएको बजेट आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा बित्न लाग्दा पनि खर्च कम देखिन्छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारमार्फत् भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत शीर्षकमा आएको पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ ।
बाग्लुङमा आर्थिक वर्ष सकिन अबको तीन महिना बाँकी रहँदा सङ्घ सरकार मार्फतको रु. एक अर्ब ५० करोड ९३ लाख ४० हजार बजेटमा जम्मा ५५ करोड नौ लाख ७३ हजार ८३९ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय बागलुङका प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञानेन्द्रराज ओझाले जानकारी दिनुभयो । सङ्घ मार्फतको बजेट हालसम्म जम्मा ३६.५० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले यस चालु आवमा विनियोजन गरेको रु. एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख ७१ हजार बजेटमा जम्मा ३१.१९ प्रतिशत बजेट अर्थात् ५० करोड १३ लाख ५१ हजार ९४२ रकम खर्च भएको छ । सङ्घबाट यहाँ विनियोजित पछिल्लो आठ महिनामा भने चालु बजेटको ५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने प्रदेश सरकारको ३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यसरी सरकारले विनियोजन बजेट अपेक्षाकृतरूपमा विकास निर्माणसहित खर्च हुन नसक्नुमा कोरोना महामारी प्रमुख कारण भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक ओझाको भनाइ छ ।
“कतिपय विकास बजेटको भुक्तानी भइनसकेर अलि कम खर्च देखिएको हो, केहीको भने बल्ल पहिलो चरणको भुक्तानी भएको छ”, ओझाले भन्नुभयो, “विकास बजेट खर्च गत वर्षहरूको तुलनामा बढ्दै गएको छ ।” ओझाका अनुसार सङ्घीय सरकारको आव २०७६÷७७ को आठ महिनामा २२ र ७५÷७६ मा १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । अहिले कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतमा खर्च हुँदै आएको चालु खर्चको अवस्था राम्रो भए पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट आव ०७६÷७७ को आठ महिनामा १४ र ७५÷७६ मा २५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव तथा विकास निर्माणमा तीन तहको समन्वय नहुँदा विकास निर्माण खर्च कम भएको पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रणको भनाइ छ ।